people Nepal » लिओनल मेसी Vs पाउल पोग्बा , काे उत्कृष्ट हाेलान ? लिओनल मेसी Vs पाउल पोग्बा , काे उत्कृष्ट हाेलान ? – people Nepal
लिओनल मेसी Vs पाउल पोग्बा , काे उत्कृष्ट हाेलान ?
Posted on June 30, 2018 June 30, 2018 by Purna Nanda Joshi
बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर लिओनल मेसीले यस विश्वकपमा राम्रो सुरुवात गर्न सकेनन्। तर, नाइजेरियाविरूद्ध उत्कृष्ट गोल गरेपछि अर्जेन्टिनी कप्तानको खेललाई लिएर पुनः तारिफ भएको छ।
आइसल्यान्डविरूद्ध १–१ गोलको बराबरी खेल खेलेको अर्जेन्टिना मेसीको पेनाल्टी ‘मिस’ पछि सम्भावित जितबाट चुकेको थियो। अझ, क्रोएसियाविरूद्ध ३–० ले पराजित खेलमा मेसी प्रभावहीन देखिएका थिए।
तर, अर्जेन्टिनी समर्थक र सरकारको आग्रहपछि उनी पुनः राष्ट्रिय टोलीमा आवद्ध भए। उनी राष्ट्रिय टोलीमा फर्किदा अर्जेन्टिनाको विश्वकप छनोट अभियान कठिन बनिसकेको थियो।
उनले अर्जेन्टिनालाई आफ्नो जादुमय खेलले उकासेका थिए। छनोटको अन्तिम खेलमा इक्वेडरविरूद्ध ह्याट्रिक गरेपछि अर्जेन्टिना विश्वकपमा समावेश भएको थियो।
पाउल पोग्बा (फ्रान्स)
सन् २०१४ को विश्वकपमा युवा खेलाडीको उपाधि जितेका फ्रेञ्च मिडफिल्डर पाउल पोग्बा प्रतिद्वन्दी गोल पोस्टमा आफ्ना साथीहरूलाई गोलका लागि बल मिलाउन मात्र होइन, गर्न पनि खप्पिस मानिन्छन्।
उनका आलोचक बेला–बेलामा उनी आफ्नो भूमिकाबाट विचलित हुने गरेको आरोप लगाउछन्। त्यसैले इङ्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडले दुई वर्ष अगाडि उनलाई करिब १० करोड युरोमा भित्र्याउँदा उनलाई खर्चिएको रकमको विषयमा ठूलो अालोचना भएको थियो।
सन् २०१३ मा फ्रान्सले युथ–२० विश्वकप उपाधि जित्दा उनी टोलीका मुख्य हतियार थिए। उनीसँगै त्यतिबेला टिममा रहेका खेलाडीको अहिले फ्रेञ्च टोलीमा बाक्लो उपस्थिति छ।
पोग्बाले यो विश्वकपको समूह चरण खेलमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। अस्ट्रेलियाविरूद्ध २–१ ले विजयी पहिलो खेलमा उनले दोस्रो गोल गरेका थिए। तर, बल अस्ट्रेलियाली डिफेन्डर बेहिचको खुट्टामा ठोक्किएको थियो।
त्यसैले ‘भार’ को रिभ्यूपछि पोग्बाले हानेको गोललाई आत्मघाती ठहर गरियो। २५ वर्षीय मिडफिल्डरले फ्रान्सबाट ५६ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलिसकेका छन्।